बजार || Rising Khabar
बागलुङ जिल्लामा दैनिक पाँच हजार लिटर दूध बिक्री
बागलुङ, ३ साउन । आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ मा जिल्लामा २५ हजार ३०० मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ । पशु विकास अधिकृत निलकण्ठ शर्माका अनुसार गत आवको तुलनामा तीन दशमलव २० प्रतिशतले दूधको उत्पादन बढेको छ । गाई र भैँसीमा ...
बर्डफ्लुबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई ७० प्रतिशत राहत थप
रत्ननगर (चितवन), २८ असार । बर्डफ्लुबाट कुखुरा नष्ट भएका चितवनका किसानका लागि ७० प्रतिशत थप राहत रकम आएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय चितवनकाअनुसार बर्डफ्लुबाट राहत बेहोरेका यहाँका १५ जना कुखुरा व्यवसायीका लागि यसरी राहत आइपुगेको हो । “राहत रकम ...
गाडी किन्न अब ३५ प्रतिशतमात्र ‘डाउनपेमेन्ट’ तिरे पुग्ने
काठमाडौ २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले गाडी खरिदमा दिने ऋणको सिमा बढाएको छ। यसअघि मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै आगामी वर्षको नीतिले ६५ प्रतिशत पुर्याएको छ। नयाँ नीतिसँगै कुनै पनि ग्राहकले ...
राजधानीको भृकुटिमण्डपमा दोस्रो राष्ट्रिय मह मेला सञ्चालन हुने
काठमाडौं, २५ असार । कृषि विभाग अन्तर्गतको व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयको आयोजनामा आगामी असार १६ देखि राजधानीको भृकुटिमण्डपमा दोस्रो राष्ट्रिय मह मेला सञ्चालन हुने भएको छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशनालयले आगामी असार २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म मह ...
काठमाडौं, २१ असार । हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने एक्सक्लुसिभ अफरसहित राजधानीको चाबहिलस्थित केएल टावरको भुइँतल्लामा सञ्चालनमा आएको केएल मोबाइल हबमा जारी मोबाइल एक्स्पोको समय असार मसान्त सम्मका लागि थप गरिएको छ । स्टक क्लियरेन्स गर्नुपर्ने केहि मोबाइल ...
आँपको राजधानी मानिने सिरहामा उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो
लहान, १८ असार । आँपको राजधानी मानिने सिरहामा यसवर्ष आँपको उत्पादनमा कमी आएको छ । अघिल्लो वर्ष बढी आँप फलेको थियो तर यो वर्ष कम फल्ने भएपनि रोगकिराले समेत असर पारेकाले यसवर्ष आँप उत्पादन घट्ेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ...
नयाँ मोडलमा होन्डाको ‘डियो’ स्कुटर बजारमा
काठमाडौ १८ असार । नेपालका लागि होन्डाको मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनीले डियो स्कुटरको नयाँ मोडल बजारमा ल्याएको छ। नयाँ डियोमा एलइडी हेड ल्याम्प र इक्वाइलेजर टेक्नोलोजीका साथ कम्बी ब्रेक सिस्टम रहेको छ। त्यस्तै माइलेजको लागि ...
काठमाडौँ, १३ असार । मूल्य घटाएर इन्डक्सन चुलो बेचेपछि बिक्री बढेको छ । चीन सरकारले अनुदान स्वरुप दिएको इन्डक्सन चुलोको मूल्य बढी हुँदा बिक्री हुन नसकेकोमा मूल्य घटाएर बेचेपछि बिक्री बढेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण ...
सुनको मूल्य बढ्यो प्रतितोला ५४ हजार २ सय रुपैयाँ
काठमाडौ ८ असार । बिहीबार सुनको मूल्य बढेको छ। चाँदीको मूल्य स्थिर रहे पनि सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला ५४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको सुन आज ...
काठमाडौं, ५ असार । हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने एक्सक्लुसिभ अफरसहित केएल मोबाइल हब सञ्चालनमा आएको छ । राजधानीको चाबहिलस्थित केएल टावरको भुइँतल्लामा सञ्चालनमा आएको केएल मोबाइल हबमा मोबाइल एक्स्पोसमेत सञ्चालन गरिएको छ । मोबाइल हवको उद्घाटन इन्टिग्रेटेट मोबिलीटी सोलुसन ...
काठमाडौ चक्रपथ भित्र मोटरसाईकल चलाउन प्रतिबन्धकोे तयारी !
काठमाडौ २ असार । सरकारले काठमाडौको चक्रपथ भित्र मोटरसाईकल संचालनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको छ । यातायात ब्यवस्था बिभागले सवारी दुर्घटना तथा यातायात अबरोधको अबस्थामा कमी ल्याउन माोटरसाईकल संचालन बन्द गर्ने तयारी गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । शहरी सवारी ब्यवस्थापनमा साना ...
पाल्पा, १ असार । रामपुर नगरपालिका–५ सानीअमराईका वासुदेव ढुङ्गाना शिक्षण पेसा छाडेर गाईपालन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । जागिरे जीवनले दैनिक गुजारा चलाउन समस्या परेपछि उहाँ शिक्षण पेसा छाडेर व्यावसायिक गाईपालनमा लाग्नुभएको हो । गाईपालन सुरु गरेपछि उहाँको दैनिकी नै बदलिएको ...
पर्यटन क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्ष करिब रु ४२ अर्ब आम्दानी
काठमाडौँ, २१ जेठ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्ष करिब रु ४२ अर्ब आम्दानी भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार आव २०७२/७३ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ४१ अर्ब ७६ करोड ५० ...
कटारीका बैंकमा एटिएम सेवा नहुँदा सेवाग्राही मारमा
गाईघाट (उदयपुर), १४ जेठ । उदयपुर जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कटारी बजारका सरकारी तथा निजी बैंकमा अहिलेसम्म पनि बैंकले एटिएम सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । कटारी क्षेत्रमा रहेका झन्डै आधा दर्जन सरकारी तथा निजी बैंकले ...
मूल्य नपाएपछि उत्पादित अलैँची घरमै थन्क्याउन बाध्य
फलेवास (पर्वत), १३ जेठ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अलैँचीको मूल्य करिब आधाले घटेपछि पर्वत जिल्लाको भोक्सिङका किसानले उत्पादन गरेको अलैँची बिक्री गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्रतिकिलो रु दुई हजार ८०० मा बिक्री भएको अलैँची यो वर्ष एक ...
काठमाडौ १३ जेठ । रेनो अटोमोटिभको आधिकारिक वितरक एडभान्स अटोमोबाइल प्रालिले लजी स्टेपवे संस्करणको नयाँ गाडी नेपालमा अनावरण गरेको छ। यसको आन्तरिक तथा बाह्य सजावटमा नयाँपनसहितको लजी स्टेपवेले डिजाइन, स्पेस, कार्यदक्षता, सुरक्षा र उत्कृष्ट इन्धन बचतको समिश्रणको अनुभव प्रदान गर्ने ...
वालिङ, ७ जेठ । स्याङ्जाको वालिङ– ११ छतिवनका खोमराज पौडेलले दूध बेचेर मासिक रु एकलाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नुभएको छ । चारवर्ष विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुभएका पौडेलले आफ्नै ठाउँमा केही गर्ने दृढ सङ्कल्पकासाथ ‘पौडेल पशुपालन फर्म’ दर्ता गरी भैंँसीपालन व्यवसाय ...
बुधबार पनि महँगिएयो सुन , तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढयो
काठमाडौ ३ जेठ । बुधबार पनि सुनचाँदी महँगिएको छ। अघिल्लो दिन तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेको सुन बुधबार भने २ सयले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन तोलामा ५३ हजार ७ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको छ। ...
आलुको उचित मूल्य नपाउँदा किसान मारमा
दाङ, ३१ वैशाख । आलुको उचित मूल्य पाउन नसक्दा यहाँका किसान मारमा परेका छन् । बजारमा भारतीय आलु आयात गरिए पछि मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उचित मूल्य नपाएपछि यहाँका किसानले उत्पादन गरेको आलु बिक्री गर्न छाडेका छन् ...
औषधि आपूर्ति रोके कारबाही गर्ने संघको चेतावनी
काठमाडौं २९ बैशाख । नेपाल औषधि व्यवसायी संघले निहीत स्वार्थमा केही व्यवसायीहरुले औषधि आपूर्ति रोक्ने चलखेल भएको आरोप लगाएको छ ।केही महिनाअघिमात्रै गठन भएको नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले औषधि आयात ठप्प बनाउने चेतावनी दिएलगत्तै व्यवसायी संघले कडा आपत्ति जनाएको हो ...
साइराम डेन्टलकेयर चितवन विश्वकै उत्कृष्ट सातभित्र
चितवन, २७ वैशाख । चितवन र छिमेकी जिल्लाका २५ हजारभन्दा बढीको निःशुल्क रुपमा दन्तपरीक्षण गराएको यहाँका साइराम डेन्टलकेयर विश्वकै उत्कृष्ट सातभित्र पर्न सफल भएको छ । साइराम डेन्टलकेयर ‘हम्बल’ क्लिनिकबाट पुरस्कृत भएको हो । एसियाकै पहिलो संस्थाको रुपमा आफ्नो संस्थाले ...
पाँच हजार पाँच सय ९५ मेट्रिक टन मुसुरो उत्पादन
कलैया, २६ वैशाख । बारामा आव २०७३÷७४ मा पाँच हजार पाँच सय ९५ मेट्रिक टन मुसुरो उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख शिवरत्न साहका अनुसार कृषकले ११ हजार ६०० हेक्टरमा प्रतिहेक्टर ०.४८ मेट्रिक टनका दरले सो परिमाणमा ...
सदावहार ‘हुन्डाइ ग्राण्ड आइटेन’, के छन् विशेषता ?
काठमाडमौ २५ बैशाख । नेपाली बजारमा हुन्डाई ‘ग्राण्ड आइटेन’ गाडीको पछिल्लो संस्करण गत महिना मात्र सार्वजनिक भएको हो। बजारमा आएको एक महिनामै यो कारले धेरैको मन जित्न सफल भएको छ। हुन्डाईको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ग्राण्ड आइटेन ...
करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउन दुई अर्बको एलइडी बल्ब खरिद गरिँदै
काठमाडौँ, २४ वैशाख । करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ सरकारले एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आगामी हिउँदलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जाको मागलाई स्थिर राख्न र उपलब्ध विद्युत् बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा पु¥याउने तथा विद्युत्भार कटौतीलाई ...
धनगढी, २१ वैशाख । व्यावसायिक आलुखेतीमा लागेका कैलालीका आलु उत्पादक किसान उचित मूल्य नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । भारतीय बजारबाट भित्रिने आलुको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि स्थानीय किसान समस्यामा परेका हुन् । आलु उत्पादन गर्दा लागेको लागतअनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको ...